Metallization Layer China Manufacturers & Suppliers & Factory
Metallization Layer - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 15 ye-Metallization Layer)
Vula i-Alumina Body Ceramic nge-Mo / Mn Metallization
Vula i-Alumina Body Ceramic nge-Mo / Mn Metallization Ngesidingo esithile esikhethekile ekusebenziseni okuphezulu okuvaliwe, ukukhishwa kwe-Mo / Mn kuphela kumzimba wesisekelo se-ceramic kukhethwa. Singahlinzeka ngefilimu encane ngezinga elihlukile lokufaka imali. Ingqimba ye-molybdenum ingahlanganiswa emzimbeni...
I-Ceramic Metallization Disk ye-Metal kuya ku-Ceramic Joining
I-Ceramic Metallization Disk ye-Metal kuya ku-Ceramic Joining I-metallized disc ceramic yafaka isikhala sensimbi endaweni ethile zombili zombili, noma ohlangothini olulodwa, bese selulapha ekushiseni okuphakeme ukuze yenze ifilimu encane / emnyama. Idlala indima ekherini ensimbi kuya ku-ceramic jointing ndawonye....
I-Film Yomzimba Otholile I-Alumina Ceramic Metallization Ring
I-Jinghui inikeza izinhlobonhlobo zezinsimbi ezinomshini we-alumina e-alumina ceramic ezenziwe ngezansi, ifilimu encane ejwayelekile ifaka i-nickle plating, i-copper plating, i-golden plating, i-tin plating njalonjalo. Ngokunyathelisa kwesikrini, ukubhubhisa ukushayela nokuphambisa ikhono lethu kusenza sikwazi...
Ukuhlanzwa okuphezulu kwe-Alumina Ceramic Metallization Spacer
Ukuhlanzwa okuphezulu kwe-Alumina Ceramic Metallization Spacer Isikhungo sethu sikhiqiza ama-spacers ahlukahlukene we-ceramic ensimbi anezici ezinamandla ezibophezele ngokuqinile nobuchwepheshe bethu bokuthuthukiswa kwe-ceramic metallization . Izinkinobho zethu ze-film metallization ezinamandla zisebenzisa ifomu...
I-substrate ye-Ceramic ne-Mo-Mn metallization
Amandla Wokunikezela: 1,000,000pcs/month
I-substrate ye-Ceramic ne-Mo-Mn metallization Yenziwe nge-alumina oxide, noma i-nitride aluminium Alumina ceramic substrate isetshenziswa njalo njengebhodi lesifunda eliphrintiwe (i-PCB), njenge-substrate ye-DBC, i-Siliver yokugqoka isembatho, i-Nickle yensimbi yensimbi njalonjalo. Ubukhulu bokuqina kwe-substrate...
I-Ceramic Metallization Body
Metallizing Ring Ceramic